Heerka Jahliga ee haweenka Sucuudiga oo hoos usii dhacaysa | HimiloNetwork
Heerka Jahliga ee haweenka Sucuudiga oo hoos usii dhacaysa
Posted by: Zakariya in Wararka January 13, 2016	0 162 Views
Muqdisho (Himilonews) – Heerka jahliga ee haweenka ku nool dalka Sucuudiga ayaa hoos ahaan ugu sii dhacday 8.27%, sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee Sucuudiga.
Ilo kamid ah wasaaradda ayaa sheegay in 45-sano kahor kaliya shan dugsi oo dadka waaweyn ah ay hadda kor u dhaafeen wax ka badan 1,400 oo dugsiyo lagu barto culuumta kala duwan ee aasaasiga ah.
Warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay inay jiraan ururo wacyi-galineed oo jahliga kala dirira bulshada dhexdeeda kuwaas oo leh machadyo habeysan. Si tira leh ee ka badan 269,845 oo haween ah ayaa ka faa’iideystay horumarada socda taniyo bud-dhigiisa sanadkii 2008. Barnaamji kale oo lagu magacaabo Baraha jiiraanka ayaa sidoo kale kaalin ku yeeshay kobaca maskax ee haween badan oo Sucuudiyaan ah.
Iluhu waxaa kale oo ay tilmaameen in 25,400 oo qof ay sidoo kale ka faa’iideen mashruuca “Magaalo aan Jahli aqoon” gudaha magaalooyinka Makkah iyo Madina. Marka loo fiiriyo dardarta mashruucyadani ku socdeen, magaalooyinkan waxaa looga dhawaaqay inay ka xoroobeen makasnimada.
Qeyb kale oo gaaraysa 16,000 oo qof ayaa ka faa’iideystay wacyi-galin lix sano ah iyo ol’ole aqooneed oo lagu bartilmaameedsanayo miyiga fog ee Sucuudiga halkaas oo makasnimadu taagan tahay meesha ugu sarreysa.
Si kastaba, Sucuudiga ayaa dib u dhac uga sugnaa muddaba heerka makasnimada taas oo dowladaha soo mara lagu eedeeyo inay xakame adag ku taxaabeen ogolaanshaha wax-barista haweenka Muslimaadka ah ee ku nool dalkaas barakaysan.
Dad badan waxay qabaan in haraadigu haan maran ka roon yahay: kol haddii hadda loo guntaday in la dabar-jaro makasnimada hareysay dunida Islaamka gaar ahaan Sucuudiga.
Previous: Gabadhii koobaad ee AQALKA CAD EE MARAYKANKA xil ka qabata
Next: Siduu Islaamku ugu faafay Shiinaha?!
Haweeney – si ay ku ogaato qaabka wax loo dhaco – shaqaaleysiinaya tuugo xirfadlayaal ah!
Ninka wax-dhal ku noqday 70-jir oo ka cararaya ilmihiisa!
Hoggaamiyaha loo baahan yahay!
Bosnia oo dib u furaysa Masjidka Taariikhiga ah ee Sulejmanija.